I-Nicaragua: IJografi, iMbali, uQoqosho, iiNkcazo zeMozulu
Funda iJografi yeNicaragua yaseCentral America
Abemi: 5,891,199 (uqikelelo lukaJulayi 2010)
Amazwe ajikelezayo: ICosta Rica kunye neHonduras
Indawo yomhlaba: iikhilomitha ezili-50,336 eziqhelekileyo (130,370 sq km)
Unxweme: 565 iekhilomitha (910 km)
Indawo ephakamileyo kakhulu: i- Mogoton kwii-7,998 ii-2,438 m)
I-Nicaragua lizwe elikuMbindi yeMerika ukuya ngasezantsi kweHonduras kunye nenyakatho yeCosta Rica . Leli lizwe likhulu kunommandla waseCentral America kunye nenkunzi yayo enkulu kunye nesixeko esikhulu kunazo zonke iManagua.
Ikota enye yabemi belizwe lihlala kwisixeko. Njengamanye amazwe amaninzi eMntla Melika, iNicaragua iyaziwa ngamanqanaba akhe aphezulu kwizinto eziphilayo kunye neendawo ezizodwa.
Igama leNicaragua livela kubantu bakubo ababehlala apho ngasekupheleni kwe-1400s nakwiminyaka yokuqala ye-1500. Intloko yabo yayinguNicarao. Abantu baseYurophu abazange bafike eNicaragua kude kube ngu-1524 xa iHernandez de Cordoba yakha iindawo zaseSpeyin apho. Ngo-1821, iNicaragua yafumana ukuzimela kwayo kwiSpain.
Ukulandela ukuzimela kwayo, iNicaragua yayiswele imfazwe rhoqo njengoko amaqela ezombusazwe alwela nzima. Ngomnyaka we-1909, i- United States yangenelela kweli lizwe emva kokuxabana kwanda phakathi kwama-Conservatives kunye neeLibhali ngenxa yezicwangciso zokwakha umdanso othungelwano. Ukususela ngo-1912 ukuya ku-1933, i-US yayinamasosha kweli lizwe ukukhusela izenzo ezinenzondelelo kubantu baseMelika abasebenza kwidolobho apho.
Ngomnyaka we-1933, amasosha ase-US ashiya iNicaragua kunye noMlawuli woMkhosi weSizwe u-Anastasio Somoza Garcia waba ngumongameli ngo-1936.
Wazama ukugcina ubudlelwane obuqinile kunye ne-US kunye noonyana bakhe ababini baphumelela. Ngomnyaka we-1979, kwakukho ukuvuswa kwe-Sandinista National Liberation Front (i-FSLN) kunye nexesha leentsapho zeSomoza ekupheleni kwesikhundla. Ngokukhawuleza emva koko, i-FSLN yenze ulawulo lokunyanzelisa phantsi kolawulo lukaDaniel Ortega.
Izenzo ze-Ortega kunye nolawulo lwakhe lolawulo lwaphelisa ubudlelwane obusondeleyo kunye ne-US kwaye ngo-1981, i-US yamisa uncedo lwangaphandle kwiNicaragua.
Ngowe-1985, i-embargo yafakwa kwi-trade phakathi kwamazwe amabini. Ngo-1990 ngenxa yengcinezelo evela ngaphakathi nangaphandle kweNicaragua, urhulumente wase-Ortega wavuma ukukhetha ukhetho ngoFebruwari waloo nyaka. UVioleta Barrios de Chamorro wanqoba ukhetho.
Ngethuba lexesha lika-Chamorro e-ofisi, iNicaragua yashukumisela ekudaleni urhulumente wentando yesininzi, ukuzinzisa ubutyebi nokuphucula imicimbi yamalungelo abantu okwenzeke ngexesha le-Ortega e-ofisi. Ngo-1996, kukho olunye ukhetho kunye nomongameli wangaphambili waseManagua, uArnoldo Aleman wanqoba uongameli.
Uongameli we-Aleman, nangona kunjalo wayenenkxalabo enzima kunye nenkohlakalo kwaye ngo-2001, iNicaragua kwakhona yabamba ukhetho loongameli. Ngeli xesha, u-Enrique Bolanos wanqoba uongameli kunye nephulo lakhe lizimisele ukuphucula uqoqosho, ukwakha imisebenzi nokuphelisa urhwaphilizo lukaRhulumente. Nangona kunjalo, unyulo lwamaNicaragua olulandelayo luye lwaphazamiseka ngorhwaphilizo kwaye ngo-2006 uDaniel Ortega Saavdra, umviwa we-FSLN, wakhethwa.
Namhlanje urhulumente waseNicaragua uthathwa njengeRiphablikhi. Inalo igqeba elilawulayo elenziwe yintloko yombuso kunye nentloko ka rhu lumente, ezo zombini zizaliswe ngumongameli kunye nebebe lezomthetho eliqulethwe yiNdibano yesiZwe engeyiyo.
Isebe lesigqeba saseNicaragua lineNkundla ePhakamileyo. I-Nicaragua ihlulwe ngamasebe angama-15 kunye neendawo ezimbini ezizimeleyo zokulawulwa kwendawo.
Uqoqosho kunye nokusetyenziswa komhlaba kwiNicaragua
I-Nicaragua ithathwa njengelona lizwe lihlupheke kakhulu kwiCentral America kwaye, ngokunjalo, luneempesheni ephezulu kakhulu kunye nentlupheko. Uqoqosho lwayo lusekelwe ikakhulu kwezolimo nakubashishini, kunye nemveliso yayo ephezulu yokutya ukutya, iikhemikhali, umatshini kunye nemveliso yensimbi, izambatho, izambatho, ukucocwa kwepetroleum nokuhambisa, ukusela, izihlangu kunye neenkuni. Izityalo eziphambili zaseNicaragua zikhofi, ibhanana, umkhombe, ikotoni, ilayisi, ingqolowa, iteksi, i-sesame, isoya kunye nobhontshisi. Inkomo, inyama, ingulube, inkukhu, iimveliso zobisi, i-shrimp kunye ne-lobster nazo zimashishini amakhulu eNicaragua.
IJografi, iMozulu kunye neentlobo ezahlukeneyo zaseNicaragua
I-Nicaragua lilizwe elikhulu elikuMbindi eMelika phakathi kweLwandle lwasePacific kunye nolwandle lwaseCaribbean.
Iindawo zalo zincinxweme ezinxweme ekugqibeleni ziphakama kwiintaba zangaphakathi. Ngecala lasePacific lelizwe, kukho inqwelana elincinci elunxwemeni elunxwemeni. Imozulu yaseNicaragua ithathwa njengezityalo ezinqabileyo kwiindawo eziphantsi kwayo kunye namaqondo ashushu aphezulu kwiindawo zayo eziphakamileyo. Inkulu-dolobha yaseNicaragua, iManagua, inokufudumala okushisa kunyaka wonke ujikeleza malunga ne-88˚F (31˚C).
I-Nicaragua iyaziwa ngenxa yezinto eziphilayo ngenxa yokuba imvula yamanzi ihlanganisa iikhilomitha ezili-20 000 zeekhilomitha ezili-20 000 zelizwe laseCaribbean. Ngaloo ndlela, iNicaragua inekhaya kwiikati ezinkulu ezinjengejaguar kunye ne-cougar, kunye nama-primates, izinambuzane kunye ne-plethora zezityalo ezahlukeneyo.
Iinkcukacha ezininzi malunga neNicaragua
• Ixesha lokuphila lobomi laseNicaragua yiminyaka engama-71.5
• Usuku lwe-Independence lukaNicaragua nguSeptemba 15
• IsiSpanish ngolwimi olusemthethweni lwaseNicaragua kodwa isiNgesi kunye nezinye iilwimi zasekuhlaleni zithethwa
Agent Intelligence Agency. (19 Agasti 2010). I-CIA - I-World Factbook - iNicaragua . Kubuyiselwa ukusuka: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nu.html
Infoplease.com. (nd). Nicaragua: Imbali, iJografi, uRhulumente, kunye neNkcubeko- Infoplease.com . Ukufunyanwa kwi: http://www.infoplease.com/ipa/A0107839.html
United States Isebe likarhulumente. (29 Juni 2010). ENicaragua . Kubuyiselwa kwi: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1850.htm
Wikipedia.com. (19 Septemba 2010). I-Nicaragua - i-Wikipedia, i-Free Encyclopedia . Ifunyenwe kwi: http://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
IJografi yaseQueensland, eAustralia
Inkcazo ye-'Cavity Back 'I-Iron kwiGalofu
Ukuhlaziywa kwexesha elibi
AmaDarshanas: Isingeniso sefilosofi yamaHindu
'I-Star-Spangled Banner' ngesiSpanish
IiNkqubo ezili-12 zeeMveliso zezilwanyana
10 I-Must-Watch i-Funny Dancing Kids IiVideos